Nhau - Ungasarudza sei jira rekupfeka kwekunze?
Kune akawanda marudzi emicheka yehembe dzekunze. Ndeipi iyo inonyanya kukodzera iwe?
Mukusarudzwa kwemachira ekunze, kune matanhatu anokosha mabasa. Ngatitarisei pazvinhu zvitanhatu:
Iyo mwero wekubvumidzwa kwemweya kunoenderana neyakaomarara jira kutenderera kwemhepo. Kubvumidzwa kwemhepo kwakakosha kutarisisa kune chero chiitiko chekunze. Pakati pavo, chakakosha ndechekuvhara uye chigaro. Muzvivharo zvakavharidzirwa uye zvivharo, machira asingatenderedzwe mweya anogona kukonzera chakuvhe. Yechigaro, iyo inofema pamutsago ichave yakasununguka, kwete kunamatira kuruoko, kunyatsogadzikana muzhizha rinopisa.
Kuramba kwemvura kunyanya kunoenderana nekuti mvura ichashanduka kuita madonhwe emvura pajira. Asi pane poindi, kushomeka kwemvura uye kukwana kwemhepo imwe mushure meimwe. Kazhinji kutaura, machira ane mweya wakashata unokwenenzverwa anonyanya kudzivirirwa nemvura, senge iwo asingakundike, senge vinyl yakaputirwa kana micheka yakavezwa. Isina mvura yakakosha pakuvhara, zvipfeko zvisina mvura uye kushongedzwa kwemukati meyacht.
Kupfeka kupfeka zvinoreva kugona kweshinda kumira kusakara pasi pekunetsekana. Machira anoshandiswa muchikepe uye kushandiswa kwekunze anowanzoremerwa, akaomarara uye anowanzo kuvezwa nevinyl kana mamwe ma resini. Izvi zvinonyanya kuve nekukwirisa kutaridzika kutaridzika uye kunzwa, uye kugadzirisa kupfeka kuramba.
UV kurwisa ndiyo inonyanya kukosha uye yakapusa chinhu mumachira ekunze. Iyo yakakwira iyo UV kudzvinyirira, iyo yakareba iyo sevhisi hupenyu hwejira muzuva rezuva. Micheka yakawanda yechiedza chezuva yakakosha pane iya yemumvuri.
Iyo yakakwira iyo kukasira kwemavara kwejira, zvishoma mukana iwo muenzaniso unozopera. Iko kutsanya kwemavara kwejira kunobva pakukwanisa kwayo kuchengetedza ruvara kwenguva yakareba mushana, mvura uye sinou. Kukurumidza kwemavara kunowedzera kwechinhu chekushongedza. Nekudaro, kana mavara akajeka akashandiswa kune awnings, machira, mamati, nezvimwewo, kukasira kwemavara kunofanirwa kutariswa. Kana jira racho richizoshandiswa muhuwandu hwakawanda kana kuburitsirwa kunze kwenguva yakareba, jira rine patani yakadhindwa inogona kupera nekufamba kwenguva.
Inofananidzwa nemachira emukati, hutsanana hwemachira ekunze hunoratidzika kunge husina kukosha. Asi kune machira ekunze, hutsanana hunokanganisa hupenyu hwayo hwebasa. Utsanana, muchokwadi, kubvisa tsvina mumucheka.
Kana isina kucheneswa, chakuvhe chinosara pamucheka uye chinoramba chichikura pane ivhu. Kunge iro jira-rimwe-rakaputirwa jira harina kuchena zvakanyanya, saka rudzi urwu rwejira rinofanira kubhadhara zvakanyanya kune vamwe.